Rissho တက္ကသိုလ်မှလုပ်ငန်းခွင်ကမ်းလှမ်းချက် [Genvers] အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်စာချုပ်
Rissho တက္ကသိုလ်မှအလုပ်ခွင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် | အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများအချိန်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်စာချုပ်
# အတွေ့အကြုံနည်းရင်တောင်မှခံစားမိရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ # အတွေ့အကြုံရှိသူများသည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။သင်၏စွမ်းရည်တိုးတက်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ပိုမိုဝင်ငွေရလိုပါကလျှောက်ထားပါ။
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်လစာ ၁၇၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀ ယန်း
အလုပ်သင်နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀,၀၀၀ မှ ၁၄၀၀၀ ယန်း
[ရုံး] Toyoshiki၊ Kashiwa City, Chiba စီရင်စု
အဆိုပါနေရာများသည်တိုကျိုမြို့၏partsရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင်ရှိပြီးတိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုကိုဗဟိုပြုထားသည်။
Tobu Urban Park လိုင်း "Toyoshiki ဘူတာ"
Rissho တက္ကသိုလ်"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။
ငါတို့သည်လည်းအခြားလိုချင်သောကုသမှုကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု။ အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကျေးဇူးပြု။ ခံစားရ!
ပုံသဏ္workာန်လက်သမားတစ် ဦး သည်လက်မှုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးပျော့ပျောင်းသောကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းသည့်“ ဘောင်” ကိုဖန်တီးသူ!
ဒီ site ကိုအပ်နှင်းနိုင်သူတွေကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်။
[ပညာရေးနောက်ခံ၊ အသက်၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ ]
8:00 မှ 17:00 (site ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုအချို့ဖြစ်နိုင်သည်)
# အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆို●လစာတိုးမြှင့်ရရှိခြင်း●နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေခြင်းများ OK
●သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်၊ ●အဆောင်၊ ကုမ္ပဏီ၏အိမ်၊ ●လူမှုအာမခံစနစ်ရနိုင်သည်
# ပညာရေးနောက်ခံမလိုအပ်ပါ။ ●တိုက်ရိုက် / ခုန်နိုင်သည်
တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ အားလပ်ရက်များ၊ GW များ၊ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီရုံးပိတ်ရက်များရှိသည်
နောင်အနာဂတ်တွင်၎င်းသည်အလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်သမားတစ် ဦး အဖြစ်ရည်မှန်းပြီးသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်
229-1 Toyoshiki, Kashiwa City, Chiba စီရင်စု
၂၂၉-၁ Toyoshiki၊ Kashiwa City, Chiba စီရင်စု၏မြေပုံကိုကြည့်ပါ
Rissho တက္ကသိုလ်※"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။